नेपालका दुई Memory King, को भन्दा को कम ? - Enepalese.com
नेपालका दुई Memory King, को भन्दा को कम ?
इनेप्लिज २०७७ साउन १६ गते २१:३३ मा प्रकाशित
अर्पणकै शब्दमा उनले यो स्मरणशक्ति जन्मजात पाएका होइनन् । योगध्यानको बलले आफ्नो दिमागलाई तिखारेका हुन् । एसएलसी पास भएपछि अर्पणले आफूलाई तिखारेको बताउँछन्। एसएलसीपछिका दुई वर्ष उनले पूरै दुनियाँ भुलेर आफूलाई योग-ध्यानमा लिन गराए ।